DHAGEYSO: KG oo ka warbixisay xubno ka tirsan Shabaab oo isku soo dhiibay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka DHAGEYSO: KG oo ka warbixisay xubno ka tirsan Shabaab oo isku soo...
DHAGEYSO: KG oo ka warbixisay xubno ka tirsan Shabaab oo isku soo dhiibay
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya C/qaadir C/raxmaan oo la hadlay Idaacadda Risaala ayaa ka warbixiyay Howlgalada dardarta leh ee ka socda degaanada Koonfur Galbeed.
Gobolada Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose ayuu sheegay in ay iska soo dhiibeen xubno ka tirsan ururka Al-shabaab.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in maalmhii lasoo dhaafay ciidamada dowladda ay xoojiyeen howlgalladda ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxaa uu ugu baaqay dhalinyaradda ku jirta Al-Shabaab in ay kasoo baxaan, islamarkaana ay isku soo dhiibaan maamulka Koonfur Galbeed.
Madaxweyne Shariif ayuu xusay in ay ka go’an tahay daryeelidda dhalinyaradda kasoo baxda Al-Shabaab.
Previous articleBoliiska Kenya oo toogtay Nin looga shakiyay Argagixiso
Next articleXulalka G/Banaadir iyo Jubbaland oo galabta wada cayaaray (SAWIRRO)
Ahlusunna oo shaacisay in ay ku wareejisay dowladda hubkii iyo gaadiidkoodii
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir” Hubkii loogu tala galay in Al-Shabaab looga saaro Hoteelada ayaa Dhuusamareeb la geeyay”
DHAGEYSO: Warka Subax 29-2-2020
Xildhibaanada Koonfur Galbeed ee lasoo xulayo oo laga rabo lacag diwaangalin ah
Mareykanka oo sheegay inuu duqeyn ka geystay Kuunyo Barow
DHAGEYSO: Warka Habeen 28-2-2020
DHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 28-02-2020
Dhageyso:-Warka Subax ee Radio Risaala 28-02-2020
DAAWO:-Maxaa ka jira in Carruur Gaajo ugu geeriyoodeen Muqdisho?
Daawo:-Maxaa ka Cusub Siyaasada Soomaaliya
Dhageyso:-Guddiga Doorashooyinka Galmudug oo Warbixin soo saarey
Ciidanka Milatariga Soomaaliya gaar ahaan Guutadda 15-aad oo u badan Ciidankii Ahlusunna ee la qarameeyay ayaa la wareegay Ammaanka Madaxda ugu sareysa Ahlusunna ee...